मधेशले कम्तीमा ८० निर्वाचन क्षेत्र पाउँछ – डा. मीनेन्द्र रिजाल (पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता)
जनसंख्याभन्दा भूगोललाई निकै कम महत्व दिइन्छ । ...... अमेरिकामा सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन क्षेत्रमा ९ लाख दुई हजार जनसंख्या छ । सबैभन्दा सानो निर्वाचन क्षेत्रमा ४ लाख ९३ हजार जनसंख्या छ । सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा सानोका बीच झण्डै दोब्बरको फरक छ । त्यस्तै, भारतमा सबैभन्दा सानो निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्यदीपमा करिब ६४ हजार जनसंख्या छ । राजस्थानमा सबैभन्दा ठूलो २८ लाख जनसंख्यामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ । .....
नेपालमा ६ वटा अत्यन्त विकट र कम जनसंख्या भएका जिल्ला छन् । डोल्पा, मुगु, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ र रसुवा यी ६ वटै जिल्लामध्ये कुनै पनि जिल्लामा ५६ हजार जनसंख्या छैन । ... यदि जनसंख्याको मात्र आधार बनाउने हो भने ६ वटा जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र नै हुँदैन । यी ६ जिल्लाको भूभागको कुरा गर्ने हो भने कुल भूभागको करिब १७ प्रतिशत छ । मधेशको भूभाग पनि १७ प्रतिशत हो ।
...... जनसंख्याको आधार मात्र गर्ने हो भने ८३ हुने मधेशमा ८० सिट हुने भयो । ...... अहिले ६ जिल्लालाई क्षतिपूर्ति गरौं । ८३ को सट्टा ८० मधेशमा र ८२ को सट्टा ७९ पहाड तथा हिमालमा गरौं । ...... जनसंख्यालाई भूगोलभन्दा ८ देखि १२ गुणा बढी महत्व दिनुपर्छ । ..... तराईका २० जिल्लामा ८० वटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ । पहाड र हिमालका बाँकी ५५ जिल्लामा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ । पहाडमा एउटा भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला कमै हुन्छ । ३४ वटा जति जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ । तराईका कुनै पनि जिल्लामा ३ भन्दा कम निर्वाचन क्षेत्र हुँदैन । ..... तराईका २० जिल्लामा तीनदेखि ६ सम्म निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । ..... समानुपातिक समावेशीमा अन्तरिम संविधानभन्दा फरक के छ भने थारू, मुस्लिम र पिछडावर्गको बेग्लै क्लष्टर बनाइएका छन् । यी तीन वटा क्लष्टर थपिए । किन भने थारू, मुस्लिम र पिछडावर्गले पनि आ–आफ्नो अधिकारको सुरक्षाको माग गरेका थिए । मुस्लिमहरूले हामी मधेशी हौं तर, मुस्लिमका रूपमा व्यवहार गरियोस् भन्ने उनीहरूको माग छ । थारूहरूले पनि हामी मधेशी हौं तर, थारूका रूपमा व्यवहार गरियोस् भनेर भनेका छन् । त्यसैले यी क्लष्टरहरू थपिएका छन् । अरू त अन्तरिम संविधानकै भाषा छ । ....... खस समुदायभित्र पनि सबै खसले आरक्षण पाउँदैनन् । आर्थिक रूपले बिपन्न खसहरूले मात्र आरक्षण पाउनेछन् । ..... अत्यन्तै बिपन्न मानिसको बसोबास रहेका जिल्लाकाले आरक्षण पाउनेछन् । जस्तो कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाका जनताले आरक्षण पाउनेछन् । ..... मधेशी, महिला, जनजाति–आदिवासी रहेका क्लष्टरमा चाहीं सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक आधार बनाइएको छ । र, यसमा खस–आर्यका लागि अत्यन्त बिपन्नले मात्र पाउने हुन् । .......
अहिले आन्दोलनको तातो मानसिकताबाट प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गरियो भने एक ठाउँमा भएको आन्दोलन अर्को ठाउँमा सरेर जान्छ ।
...... सीमांकनको विषय तीन महिनामा टुंगो लगाउने र नागरिकताको विषय उनीहरूले भनेको भावअनुसार संविधानमा संशोधन गर्ने हामीले भनिरहेका छौं । अरू विषयमा पनि हामी सहमतिको धेरै नजिक पुगेका छौं । ...... कतिपय साथीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा हुँदा बुझेको भन्छन् । तर, बाहिर सार्वजनिक रूपमा भन्दैनन् । नमिलेका विषयमा सहमति खोजौं । अहिलेको संशोधनमा उनीहरूको समेत सहभागिता हुन पाएको भए नमिलेका विषयमा सहमति निर्माण गर्न एउटा बलियो आधार बन्न सक्थ्यो । त्यसैले अब बाँकी चार विषय उनीहरूको समेत सहभागितामा संशोधन गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ । ...... सबै मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई जोड्दा पनि उहाँहरूको भन्दा हाम्रो मत बढी छ .......... सम्झौता सबैले गर्नुपर्छ । केही संशोधन भइसक्यो । अरू पनि संशोधन गर्छौं । मैले भनेको सबै हुने र अरूले भनेको केही नहुने कुरा गर्नु हुँदैन । ..... तीन महिनाभित्र राजनीतिक समिति बनाएर सर्वसम्मतिबाट टुंग्याउ । पहिले सुर्खेतमा आन्दोलन भयो । सीमाङ्कन फेरिएपछि आन्दोलन मधेशमा स¥यो । सीमाङ्कन तातो मानसिकताबाट परिवर्तन गरियो भने फेरि अर्को ठाउँमा सर्छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आन्दोलन सार्ने कामले कसैको भलाइ हुँदैन । त्यसैले तीन महिनाभित्र सीमाङ्कनको विषय पनि सहमतिबाट टुंगो लगाउनुपर्छ ।
Posted by Subhash Chandra Shah on Sunday, February 7, 2016
Photos taken by North Vietnamese photographers show the war like it's never been seen.
Posted by Mashable on Friday, February 5, 2016
Posted by Rajesh Ahiraj on Sunday, February 7, 2016
Madhesh is going to be the centre of Asian Spring that will createadisaster for China and Pakistan while liberating the oppressed groups.
Dear Friends,There has been Madhesh news of circulating around. People feel confused. Even after struggling for 6...
Posted by CA Pravin Dhoti Karn on Saturday, February 6, 2016